को हुन ४६औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित बाइडेन ? - NewsCenterNepal.com
को हुन ४६औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित बाइडेन ?
एजेन्सी-बाइडेन डेमोक्रोटिक पार्टीका सदस्य हो । सन् २०१२ मा पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा कालमा उहाँ उपराष्ट्रपति बन्नु भएको थियो । उहाँ १९७० मा न्यु क्यासल कन्ट्री काउन्सिलर पदमा जित हात पार्दै अमेरिकी इतिहासमा छैटौं कान्छो सिनेटर बन्नु भएको थियो । यहीँबाट उनको राजनीतिक यात्रा सुरु भएको थियो ।
कानुनमा डिग्री हासिल गरेका उहाँले जनताको न्यायसम्बन्धी थुप्रै कानुन निर्माणमा योगदान गर्नु भएको छ । लागू औषध, अपराध, नागरिक स्वतन्त्रता, नारी हकजस्ता कानुनका उहाँ पक्षपातस् रहँदै आउनु भएको छ । बाइडेन ६ पटकसम्म सिनेटमा निर्वाचित हुनु भएको हो । उहाँको जितले विश्वमा शान्ति कायम गर्ने भूमिकामा महत्वपूर्ण योगदान हुने अपेक्षा गरिएको छ । चीनसँगको बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारमा उहाँको जोड रहेको छ ।
७८ वर्षीय डेमोक्रेटिक उम्मेदवार बाइडेन राष्ट्रपति पदमा पुग्ने अमेरिकाका सबैभन्दा वृद्ध व्यक्ति बन्नु भएको छ । उहाँले उमेरको रेकर्ड बनाएको यो पहिलो घटना भने होइन । आफ्नो राजनीतिक करियर सुरु गर्दै १९७२ मा उहाँ३० वर्षको उमेरमा पहिलो पटक डेलावेयरबाट देशको पाँचौं सबैभन्दा कम उमेरका सिनेटरका रूपमा निर्वाचित बन्नु भएको थियो । यो सिटबाट ६ पटक सिनेटर चुनिएका बाइडेनले पहिलो पटक सन् १९८८ मा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको दाबेदारका रूपमा आफूलाई उभ्याउनु भएको थियो ।
त्यसपछि उहाँ दोस्रो पटक २००८ मा राष्ट्रपति बन्न डेमोक्रेटिक पार्टीबाट उम्मेदवारको दौडमा रहनु भएको थियो । त्यसबेला उहाँ बाराक ओबामासँग पछि पर्नु भयो । तर, ओबामाले उहाँको अनुभव र देश विदेशमा रहेको सम्मानका कारण आफ्नो उपराष्ट्रपतिका रूपमा अघि बढाए र दुवै कार्यकालमा जो बाइडेन उपराष्ट्रपति बनेन्नु भयो । ओबामाले बाइडेनलाई हालसम्मकै सर्वश्रेष्ठ उपराष्ट्रपति घोषित गर्नुभएको थियो ।
२०१७ सम्म उपराष्ट्रपति बनेका बाइडेन यो वर्ष राष्ट्रपति बन्नका लागि तेस्रो पटक मैदानमा होमिनु भएको थियो । यस वर्ष उहाँ बहालवाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पछि पार्दै देशको ४६औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु भएको हो ।
हामी एउटै डुंगामा छौं पार्टी एकता बचाइ राख्न विवाद विर्सेर एकताको वाटो फर्कनुस :मुख्य मन्त्री पोख्रेल